South Carolina Real Estate Developer Future-na-egosi New HQ With Cutting-Edge LG Display Tech and BYOD Conference Rooms | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » South Carolina Real Estate Developer Future-na-egosi New HQ With Cutting-Edge LG Display Tech and BYOD Conference Rooms
Onye na - ahụ maka ihe ndị dị n’ime ime obodo n’Ọfịs na-ewepụta enweghị nkebi, sistemụ ọgbakọ kensinammuo klọọkụ dị oke mkpa maka ọganiihu na-aga n’ihu ka mgbawa nzukọ na-aga n’ihu.
Mgbe ole Beachlọ ọrụ Beach, otu ụlọ ọrụ mmepe ụlọ nke afọ 75 dị na Charleston, South Carolina, kpebiri ịkwaga ma mee ka isi ụlọ ọrụ ya dị ọhụrụ, ụlọ ọhụrụ eji eme ihe eji eme ihe nke akpọrọ Jasper gosipụtara ebe dị mma. Azụmaahịa Charleston a na-ahụ anya na-eduzi ọtụtụ nzukọ, nleta ndị mmekọ na mmekorita arụmọrụ, yabụ ha nyere ndị ọkachamara na teknụzụ mpaghara ha. Ndị Ọfịs iji chepụta ma wụnye netwọk nke ọnụahịa LG na-egbu egbu nke ahụ na-enyere aka hụ na mmekorita arụmọrụ na-enweghị ntụpọ na ntanetị dị mfe, weta ngwa nke aka gị (BYOD) na ịdị njikere n'ọdịnihu.
Ingmepụta maka Ọdịnihu
Ọbụna tupu ọdịbendị ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ gbanwere na ọrụ dịpụrụ adịpụ na mbido 2020, Companylọ Ọrụ Beachlọ Ọrụ ahụ ekpebie na HQ ọhụrụ ya ga-eme ka teknụzụ AV kachasị ọhụrụ iji meziwanye nkwukọrịta, kwado mmekorita nke oge a ma gosipụta ọnọdụ na-eche ihu maka ndị ọbịa na ndị ọrụ. Mgbe ya na ndị ọrụ Ọfịs na-arụ ọrụ ịhazi mkpa teknụzụ ọ bụla, ọ bịara doo anya na LG Electronics bụ naanị onye nrụpụta ngosi nke nwere ike ịnapụta usoro niile nke klaasị chọrọ. Ha gụnyere ihe ngosi ọkụ nke 130-inch niile na-ele anya (DVLED), ihe ngosi 98-inch 4K LCD, ngosipụta vidiyo LCD nke 3 × 3 mejupụtara itoolu 55-anụ ọhịa 4K, ọtụtụ mkparịta ụka 65-inch. ngosipụta ụlọ na ihe ngosi akwụkwọ ahụaja 65 nke anụ ọhịa OLED nke dị naanị 3.85mm.
Dabere na Jeff Hazelwood, onye njikwa ụlọ ọrụ teknụzụ teknụzụ na nchekwa ozi, ụlọ ọrụ gwụchara na-eme nkwupụta ọgbara ọhụrụ ọfụma nye ndị ọbịa, na-eweta ọhụụ dabara na ịma mma obodo ahụ. Nọdụ ihe dịka otu ngọngọ site na Osimiri Ashley ma biri na nke ise na nke isii, ngosipụta dijitalụ kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ ahụ dị ezigbo mma ma na-enwu gbaa nke na ụgbọ mmiri na-agafe na-ahụ ya nke ọma.
"Anyị mere ahụmahụ AV anyị na Jasper nwere ọtụtụ ebumnuche n'uche," ka Hazelwood kwuru. “Ọ dị mkpa ka ọ dị mfe iji, yana ahụmịhe onye ọrụ maara nke ọma site na ime ụlọ ruo n'ọnụ ụlọ, na mgbakwunye na ịbụ ihe akaebe n'ọdịnihu. Na mgbakwunye, anyị gara maka ihe 'wow'. N'ihi ndị ọkachamara na The Office People, anyị kere a ngosi na n'ime na bụ dị ka ohiha pụtara dị ka echiche nke mara mma Charleston dị nnọọ ná mpụga anyị windo. "
Thelọ ahụ nọdụrụ ala dịka otu ngọngọ site n'Osimiri Ashley yana ọfịs nke bi n'ala nke ise na nke isii, ngosipụta dijitalụ kachasị ukwuu nke Companylọ Ọrụ The Beach bụ n'ezie ihe dị egwu ma na-enwu gbaa nke na ụgbọ mmiri na-agafe na-ahụ nke ọma.
"Jasper bụ otu n'ime ụlọ ndị kasị ukwuu na Charleston, na Beachlọ Ọrụ The Beach maara nke ọma, ya mere na nke a bụ akara ngosi nke ụdị maka obodo ahụ," ka Sean Mummert, Onye isi oche nke The Office People kwuru. “Ọ bụrụ na ị nọ n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ị ​​ga-ahụrịrị ihe ngosi 130 nke anụ ọhịa nile n’ime DVLED site n’ụgbọ mmiri, anyị maara nke ahụ n’ihi na ndị mmadụ agwala Jeff [Hazelwood] banyere ya. Anyị na-ahụ DVLED dị ka naanị teknụzụ nke nwere ike ịdabere na ìhè anyanwụ nke ụlọ a na-enweta kwa ụbọchị, ma ka na-arụ ọrụ n'emeghị ihe ọ bụla ruo ọtụtụ iri afọ. "
A na-egosipụta ngosipụta DVLED niile na LG Business Solutions maka ndụ 100,000 awa na njupụta zuru oke, nke ruru ihe karịrị afọ 11 na-agba 24 awa kwa ụbọchị. Dị ka otu n'ime ụdị LG niile nke LG, ngosipụta ahụ rutere n'ụzọ zuru ezu, mezie ya na njikere ịpinye ma jiri ya enweghị ntọala.
Egosiputa oru abuo
Mummert kọwara na a na-akpọ ọgbakọ ọ bụla na nzukọ nzukọ na ụlọ HQ maka ọrụ mmepe gara aga, na oge ọ bụla anaghị eji ihe ngosi ndị ahụ, ha na-arụ ọrụ dị ka akara ngosi dijitalụ ma na-agba ọsọ ọdịnaya na-egosipụta ọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ nzukọ na-anabata ngosipụta nke 65 nke anụ ọhịa 4K, ihe ngosi 130 nke anụ ọhịa DVLED na mgbidi vidiyo 3 × 3 na-eweta nnukwu ọnụọgụ dijitalụ buru ibu karị. Ihe ngosi ndị a buru ibu egosipụtara ezigbo ngwaọrụ iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ghara ịdị, yana ụlọ mgbe ụfọdụ iji tinye ọtụtụ mmadụ n'otu nzukọ.
Usoro zuru ezu nke sistemụ na-enye nnukwu elele, dị ka ihe ngosi dijitalụ ọ bụla jikọtara site na AV karịrị IP ngwọta yana sistemụ arụmọrụ Barco wireless nke na-enyere nkesa ọdịnaya zuru oke na ọrụ ọnụọgụ dijitalụ akpaghị aka. Nhazi usoro ahụ na-enyekwa ezi nkwụnye na-egwu ikuku BYOD, yabụ n'agbanyeghị onye na-agba nzukọ, ụdị akara ngwaọrụ ha ma ọ bụ ụdị ikpo okwu ha na-eji, ha nwere ike jikọọ na ngwa ngwa n'ime ụlọ ọ bụla na-enweghị nkuzi ma ọ bụ enyemaka. .
Uwe Iji Mee Mmasị
Mmetụta mbụ dị mkpa, nke ahụ metụtara ọrụ ike na teknụzụ nke ọfịs. "Ihe ngosi ọ bụla na isi ụlọ ọrụ ọhụrụ nke Companylọ Ọrụ The Beach bụ ihe dị mma n'onwe ya, mana ọ na-esiri ike iche n'echiche onye ọbịa taa nke LG OLED akwụkwọ ahụaja na-arụ n'ụlọ ọrụ onye isi ụlọ ọrụ agaghị efunahụ ya," ka Mummert kwukwara.
“LG na-akpọ ya 'akwụkwọ ahụaja' n'ihi na nke ahụ bụ n'ezie ụzọ kachasị mma isi kọwaa ya; na-erughị 4mm oké, ya ihu ọma na-aghọ otu onye na mgbidi. Mgbe ị na-anabata ndị isi ndị ọzọ na ndị isi azụmaahịa, nke ahụ bụ nkwupụta nke ọrụ ọkachamara na ịga n'ihu na-eche na TV isi sitere na nnukwu ụlọ ahịa enweghị ike inye. ”
Onye isi oche nke teknụzụ ndị mmadụ Joshua Gale kwukwara na oghere ahụ juputara na ntanetị dijitalụ, na-enye ụlọ ọrụ ahụ ezigbo ozi ikpo okwu maka nkwukọrịta ọ bụla ha nwere.
"Enweghị ihe ọ bụla na HQ ọhụrụ ahụ na-enweghị ngosipụta dijitalụ kachasị mma, na-eme ka ngwa ngwa ngwa ngwa dijitalụ bụrụ ihe dị oke mkpa iji bulie uru netwọkụ ahụ na ịkekọrịta ozi na mmelite na ndị ọrụ," Gale kwuru.
Na mgbakwunye na ngosipụta ahụ, ndị ọrụ Office tinyekwara igwefoto pan-tilt-zoom ọhụrụ dị elu (PTZ), igwe okwu, okwu okwu, mbadamba tebụl na usoro nhazi / ndoputa ụlọ nke na-eji ikpo okwu Outlook 365.
Previous: Teknụzụ Starfish na-akwado nzukọ Devoncroft Summit
Osote: Clear-Com's FreeSpeak II bụ "enweghị ebe obibi" na ihe omume Mgbasa Ozi Kuaishou N'oge Ememe Afọ Ọhụrụ Ndị China nke 2021